China Battery Industry na ndị ọzọ Chemical Ihe Jiri Fluidized-bed Jet Mill ụlọ ọrụ na-emepụta | Qiangdi
Igwe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ akụrụngwa eji akụpịa ihe akọrọ ka ọ bụrụ ntụ ntụ, yana isi ihe dịka ndị a:
Ngwaahịa a bụ bedized pulverizer na mkpakọ ikuku dị ka ndinuak ọkara. E kewara igwe ihe na ngalaba 3, ya bụ ebe ndinuak, ebe nnyefe na ebe grading. A na-enye Mpaghara Grading na wiilị grading, na ọsọ nwere ike gbanwee site na ntụgharị. The ndinuak ụlọ mejupụtara ndinuak nozulu, feeder, wdg The mgbanaka sir ọkọnọ diski n'èzí ndinuak tragaasi jikọọ na ndinuak nozulu.
Pneumatic pulverizer mejupụtara ikuku Compressor, mmanụ remorer-gas tank, ifriizi draya, ikuku nyo, fluidized bed pneumatic pulverizer, cyclone separator, mkpoko, ikuku intaker na ndị ọzọ.
Seramiiki pasting na Pu lining n'ozuzu egweri akụkụ ịkpọtụrụ na ngwaahịa iji zere scrap ígwè na-eduga na-enweghị isi mmetụta nke ọnụ na ngwaahịa.
4.Energy-irè: vingchekwa 30% -40% tụnyere ndị ọzọ ikuku pneumatic pulverizers.
5.Inert gas nwere ike iji dị ka mgbasa ozi maka egwe ọka na-ere ọkụ na ihe mgbawa.
6. A na-etipịa usoro ihe niile, uzuzu dị ala, mkpọtụ dị ala, usoro mmepụta dị ọcha na nchebe gburugburu ebe obibi.
7. The usoro adopts nwere ọgụgụ isi ihuenyo mmetụ akara, mfe ọrụ na ezi akara.
8. Kọmpat Ọdịdị: ime ụlọ nke isi igwe na-emechi circuit na-emechi emechi.
Oriri ikuku (m3/ min)
Dayameta nke nri ihe (ntupu)
Mma nke ndinuak (d97μm)
Ikike (n'arọ / h)
Arụnyere ike (kw)
Dayameta nke nri ahụ
Dayamita nke discharged ahụ
Mmepụta（kg / h）
Amfụfụ gị n'ụlọnga
Nke gara aga: -Lọ nyocha na-eji akwa akwa Jet Mill maka 1-10kg ikike
Osote: Nitrogen Protection Jet Mill System Maka Ihe Pụrụ Iche